Waxa la siinayo maalin kasta oo jecel ah nin ama gabar. Fikradaha asalka ah. Salaan ugu fiican Maalinta Jacaylka
Maalinta Jacaylka 2016: waxa la siinayaa ninka / gabar? Fikrado iyo hambalyo
Aan ka fogeyn waa mid ka mid ah fasaxyada dheer ee la sugayay ee sanadka - Maalinta Jacaylka 2016! Maanta waa waqtigii aad ka fakari lahayd wixii aad siin lahayd qofka aad jeceshahay 14-kii Febraayo. Maqaalka waxaad ka heli doontaa talooyin waxtar leh oo ku saabsan sida loo soo bandhigo hadiyadda asalka ah qeybtii labaad, iyo sidoo kale - hambalyo qurux badan oo qosol leh oo ku saabsan Maalinta Jacaylka.
Hadiyadaha ugu fiican ee Maalinta Jacaylka
Hadiyadaha ugu wanaagsan ee Maalinta Jacaylku waa kuwa la yaabi doono, fadlan oo kaliya samee wiilka ama gabadhaada si farxad leh. Had iyo jeer hadiyaddu waa inay ahaato qaab wax ku ool ah: waxaa laga yaabaa in casho lagu sameeyo goob jaceyl ah ama safar loo galo magaalada / kuugu dhow ee kuugu dhow waxay keeni doontaa dareen fiican. Si kastaba ha ahaatee, waxan soo jeedinaynaa in aad barato fikradaha ugu xiisaha badan ee hadiyadaha 14-ka Febraayo.
Waxa la siinayo maalinta oo dhan nin kasta oo jecel, ninkeeda, gacaliye
Ma ogtahay waxa aad ku faraxsan tahay saaxiibkaa saaxiibka ah ama ninkaaga? Dhamaan ragga ku jira qoto dheer ee qalbiyadooda sidoo kale waa mid jacayl ah, sida dumarka, taas oo macnaheedu yahay in haddii hadiyaddaadaada Maalinta Jiiraanka ay taabato oo aad u macaan, gacaliyahaaga ayaa wali kudheer iyo farxad. Sidaa darteed, noocee waxyaabo aan caadi aheyn ayaad siin kartaa nin / ninkaaga Maalinta Jacaylka?
Racfaan qaadashada jimicsiga ama tikidhada ciyaaraha kubada cagta. Haddii ninkaagu ciyaarayo ama si joogto ah u daawado kubadda cagta, wuu ku farxi doonaa. Si kastaba ha noqotee, marka uu qof jecel yahay uu ka fog yahay dhaqdhaqaaqa isboortiga, wuxuu tikidhka siin karaa riwaayad ah koox uu jecel yahay.
Maro qafiif ah, gacmo guntin ama dhidid. Xilliga jiilaalka, hadiyaddan macaan iyo jaceylku waxay ku farxi doonaan daacadnimadaada oo kaliya waxay keeni doontaa dareen farxad leh.
Qalabka casriga ah. Waxay noqon kartaa noocyo kala duwan oo dahab ah, iyo walxo maqaar. Ku dhowaad dhammaan ragga waa waalan oo ku saabsan saacado qurux badan ama mindiyo ciidan fiiqan.
Waxyaabaha mataanaha ah: tusaale ahaan, laba shaashadood oo isku mid ah: isaga iyo adiga.
Dareenno muuqda. Waxaa laga yaabaa, waa hadiyad tan loogu talagalay Maalinta Jacaylka ah ee noqon karta midka aan la ilaawi karin, labadaba dhallinyaradaada iyo adiga. Tag safar, waqti ku qaad beerta biyaha ama tag rugta dabbaasha - riyooyin farxad leh oo la siin doono!
Xitaa fikradaha asalka ah ee asalka ah ee loogu talagalay hadiyadii Febraayo 14 waxa halkan laga heli doonaa
Waxa la siinayo Maalinta dhammaan kuwa jecel, xaaska, gacaliye
Waxaa habboon in la ogaado in waxa ugu muhiimsan ee ninkan Maalinta Jacaylka ah waa in uu bixiyo dareenkiisa ugu badan ee gabadhiisa sida ugu macquulsan, maxaa yeelay hadyaal qaali ah ma beddeli karo daryeelka iyo dareenka. Si kastaba ha noqotee, si aad u sameysid gacaliyahaagu ku faraxsan yahay soo bandhigid qurux badan waa waajib qof walba. Hoos waxaa ku qoran fikradaha muhiimka ah ee gabadha ama naagta ku saabsan Maalinta Jacaylka ah ee fasaxan jaceyl:
First of all, ka taxaddar inaad doorato bouquet qurux badan loogu talagalay gabadhaada ama gabadha aad jeceshahay. Ogow sida ubaxa ay ugu jeceshahay oo ay u iibsato, ku duudduubtay qurux qurxoon.
Dharka ayaa ah hadiyadda ugu badan "guuleysiga-guusha", taas oo aad kala badhkuna noqon doono mid aad u faraxsan oo ku qanacsan. Markaad dooratid giraan ah horay, u ogow xajmiga dumarka aad jeceshahay iyo nooca dhagaxa ay jeceshahay.
Qalab fudud oo jilicsan. Gabar kasta waxay ku farxi doontaa sida arrin macaan.
Hadiyad Maalinta Jacaylka ah, oo ay samaysay gacmohooda: gabay lagu sharfayo gabadha qalbiga ama muuqaal sawir leh. Mana ahan lagama maarmaan inaad noqoto farshaxan tayo leh ama kombiyuutar - waxaad si fudud u adeegsan kartaa adeegyada xirfadlayaasha, natiijada ugu dambeysa waxay la yaabi doontaa oo ku farxi doontaa qofka aad jeceshahay.
Hambalyo ku saabsan Maalinta Jacaylka - gaaban (sms)
SMS-gaaban-hambalyo ah Maalinta Jacaylka waa hab weyn oo midba midka kale u hambalyeynayo, gaar ahaan haddii aad kala fogaanaysid masaafo wayn. Ku farxi qeybta labaad - u dir mid ka mid ah sms.
Hambalyo ku saabsan Maalinta Jacaylka ee qiyaasta
Marka lagu daro gabayada, waxaad ku muujin kartaa dareenkaaga qiiradaada. U hadal erayada geesinimo leh ee jacaylka badhkaaga.
Salaanta quruxda badan laga bilaabo maalinta la jecel yahay aayadda
Sidoo kale ka fiirso erayada cajiibka ah ee wanaagsan ee ku saabsan jacaylka:
Hambalyo badan maalinta Maalinta Jacaylku waxay eegaan halkan.
Maalinta Jacaylka ee 2016 waa munaasabad cajiib ah si aad u qirto qof aad jeceshahay dareenkaaga iyo inaad ku raaxeysatid hadiyado taabasho aan caadi ahayn. Ku faraxsanow!
Gabood gaaban waxqabadka subaxdii ee Sanadka Cusub ee xanaanada caruurta iyo dugsiga aasaasiga ah: casriga casriga iyo gabayada-qolka
Maalinta Waalidiinta ee sannadka 2016 - xusuuso kuwa la jecel yahay
Aayadaha quruxda badan iyo gaaban 8-da Maarso ee loogu talagalay carruurta 3-10 sano jir
Waxa la siinayo Sannadka Cusub 2017 hooyada iyo aabaha, wiilka saaxiibka ah ee saaxiibka ah ama saaxiibkaa ah, hooyada sodkorta, saaxiibka, macalimiinta. Fikradaha ugu wanaagsan ee Sannadka Cusub ee Sannadka ee waalidiinta, qoyska, ragga
Fikrado xiiso leh oo loogu talagalay Maalinta Macallinka ee ardayda fasallada hoose iyo kuwa waaweyn. Bandhiga quruxda badan ee Maalinta Macallinka ee fasalada 1-5 iyo 10-11
Kiyaatada kuleylka ah leh kareem caanaha
Ciladda hadalka hadalka ah
Cunto aan caadi ahayn oo sahlan oo fudud: rootiga muuska leh ee kookaha
Dagaalka Carruurta: sida loo saxo waalidiinta si sax ah?
Digaag oo dhoobo leh khudaar
Qiimaha fanaanka ee Feng Shui
Barida carruurta alfabeetada habka Zaitsev
Dhalashada umusha: hanjabaad, daaweyn
Qalabka daawooyinka ee ubaxa dooxada
Xiddiyo leh naaso weyn
Bixin xanuun iyo talobixin dhakhtar
Sida loo soo jiito nasiib iyo lacag loogu talagalay shui fui
Penne la qaata qiiqa
Sida loo doorto jaakad dhogorta midig
Mackerel lagu dubay qurxiyo leh karootada iyo basasha
Tusaalooyinka dumarka uurka leh leh gacmahooda